Harry Hole. Vaverengi Vanotaura Nezve Hunhu hwaJo Nesbø | Zvazvino Zvinyorwa
Imwe yeakanyanya kupenya mhosva dzematsotsi mumazuvano mabhuku evatema nhasi akaona mwenje wayo wekutanga, mashoma uye achitonhora zvechokwadi. Yaive iri Oslo Makore 61 apfuura. Zvanga zviri Jo Nesbø. Chisikwa chayo chinozivikanwa ndeichi Harry hole, iyo yave iri panyasha dzeakaipisisa uye asingatarisirwi kuchinjika kwepfungwa iyoyo kweinenge kota yezana ramakore. Saka heano mamwe mazano, refu uye pfupi, vaverengi ivo vanotevera maavatat avo netarisiro yakawanda sekuzvipira nekutyisa. Kutenda kune wese munhu nekutora chikamu kuburikidza nemagariro ehukama.
1 Facebook - Mapoka
1.1 Akabatwa naJo Nesbø
1.2 Solo Nhema Novel Magazini
1.3 Dema uye nhema
Facebook - Mapoka
Akabatwa naJo Nesbø
Njodzi, kusagadzikana, kusaenzana uye zvisingaite. Asi zvinotyisa uye zvisingadzivisike kudiwa. Uye akanakisa (mabhuku) mupurisa munyika, kunyangwe zvese nezvose. Nongedzo.
Makore akati wandei apfuura ndanga ndichipindura nemumwe mushandi pamwe chete neni (zvakare fan of the Nordic crime novel) mabhuku ekupedzisira atakaverenga
Ini ndinofanirwa kunge ndanga ndichitonga nhaurwa nekushingairira kwandinoita pakuyaruka kwekuyaruka, nekuti pane imwe nguva akaburitsa pachena uye akananga: «Asi ndiani gehena ari Harry Hole?». Uye iwo mubvunzo unobatana zvakakwana nekuti nei ndakagara pamberi pejira risina chinhu nhasi: hero ndiani Harry Hole?
Zvakaoma edza kutora mumitsetse mishoma kuti Harry ndiani, pamwe mumwe wevanyori vechokwadi vatapihwa nemabhuku mumakore apfuura. Hole Iko kupesana kusingaperi, bhegi pane rakanakisa uye rakanyanya kukwana, ratidziro yemwenje uye mimvuri kuti mumwe nemumwe wedu atakure mukati uye tinoedza kupwanya mukudzika kwepfungwa dzedu.
Uye kwete, handisi kuti isu tese tine mweya wechidhakwa unokanganisa kukundikana unoperekedza Harry parwendo rwake kuburikidza nehupenyu, asi haurambe kuti kanopfuura kamwe chete uye kaviri taizoda kutumira zvese kugehena. Kuzvidzora, kuzvida-uye chimiro zvapera: izvi ndini uye kana uchindida, iwe unoziva. Uye isu tinoda Harry, hazvo, zvirinani ndinomuda.
Dzimwe nguva zvinondiyeuchidza nezvegamba rekare, rizere nesimba uye simba, rakazara nenjere uye kubudirira. Dzimwe nguva zvinondiyeuchidza kumwana asingabatsiri uye anonyengera, kutakurwa nekukwira nekudzika kwehupenyu uye kugamuchira izvo zvinouya pasina kana kurwa. Hunhu hwese ihwohwo hwakanyanya uye hwakakosha. muchadenga cheHarry Hole.
Hasha dzinopindirana nerudo seyakazara, uye kana tikamira kwemineti kuti tifunge nezvazvo, aya haasi maviri manzwiro akasiyana zviso zvemanzwiro akafanana? Havasi vaviri vane mucherechedzo wemoto unoparadza zvese here?
NdiHarry moto uye simba muzviso zvavo zvakanakisa uye zvinotyisa. Unogona kuvimba naye. Anogona kunge achikwenya kanopfuura kamwe chete, asi anogara achidzoka kuzogadzirisa.
Dzoka, Harry. Nyika inoda vanhu vechokwadi (ikozvino kupfuura nakare kose). Ndinokuda. Jeg elsker deg.
Ndinofunga Harry ndiye antithesis yekukwana. Iyo inoratidza zvese kumeso kwemunhu, dzimwe nguva zvisingaiti, asi chaiko. Tinogona kuona kushomeka uye kushomeka kwayo, asiwo masimba ayo anoigadzira akasiyana. Iye akatendeka kune zvake kusvika parufu uye anoregerera zvese. Izvo zvinomuita kuti ave padyo uye ave panjodzi, kunyangwe kana isingagadzirike uye ichisimuka. Ane iyo kugona kurarama uye buda mugomba rakadzika kwazvo.
Solo Nhema Novel Magazini
Francisco Gallego Gonzalez placeholder mufananidzo
Dzimwe nguva munhu akapererwa nehutachiona, asi aine kuvimbika humbowo hwezvose.
Harry Hole ndiye quintessential antihero uyo anopona kunyangwe nezvose zvisina kunaka zvinwiwa izvo hupenyu zvinomushandira iye sebhodhoro reJim Beam.
Harry Hole ndiye mupurisa wandinodisisa, ndakaverenga ese mabhuku gumi nemaviri ake semunhu mukuru, ndakaaverenga zvakateedzana uye ndakadanana nehunhu. Zviri atypical, ivhu, kukanganisa, kusurukirwa uye kutendeka kwazvo kushamwari dzako.
Harry ndiye quintessential mupurisa. Kune yake yemukati intuition iye ajoina a hunhu hunoshungurudzwa uye kuvimbika kwakazara. Mhuri uye doro ndiwo injini dzayo.
Maria del Carmen López Perez
Jo Nesbo naHarry Hole. Mubatanidzwa wakakwana.
Naome Santana Frías
Harry Hole ndiye antihero plus gamba izvo zvandakafarira. Hunhu hukuru, hwakazara nezvikanganiso zvekuti anowira murudo.
Harry Hole ndicho chega chokwadi, pane kumberi uye shure kwake. Zvinoshamisa.
Kwandiri Ndinoda Harry. Akaoma, chidhakwa, anoshandisa nzira dzisina kujairika ... Ane zvakapfuura zvakapfuura uye, kunyangwe zvese, mumwe anoona maari mamiriro ehunhu netsitsi izvo zvinomuita mumwe wevandinofarira mabhuku.
Dema uye nhema
Mumwe wekufamba naye watakaona rova pasi uye uberekwe patsva nguva dzose neimwe nzira, uye isu tinotarisira kuziva zvakawanda nezvazvo isu tichigovana zvishoma zvinwiwa.
Jaume Bonfill (mupepeti weReservoir Mabhuku)
Un shamwari isingaregererwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Harry Hole. Vaverengi Vanotaura Nezve Hunhu hwaJo Nesbø
Harry Hole akandifadza kubva mubhuku rekutanga, zvinonetsa kuti uwane munhu ane simba rakawanda uye panguva imwechete nekunzwa kukuru
Pamwe chete naServaz (de Minnier), Hole angave ari mupurisa anoferefeta akakwana anofanirwa kuve nematsotsi ega ega munyika.